naArenti Smart musi wa19 / 05/21
Hangzhou - Chivabvu 19, 2021 - Arenti, anotungamira IoT smart imba yekuchengetedza kamera mupi, nhasi azivisa kudyidzana kwake naVisiotech semugoveri wayo Red Dot Dhizaini 2021 uye iF Dhizaini 2021 yakapihwa Arenti Smart Home Security Makamera. Iwo matsva ekubatana mamaki Ari ...
naArenti Smart musi wa13 / 04/21
Hoofddorp, Kubvumbi 13, 2021 - Arenti akahwina yegore rino iF DESIGN AWARD, iyo inozivikanwa pasi rese mubairo. Chigadzirwa chinokunda, Arenti Optics Smart Home Security Series, yakahwina mukuranga kwechigadzirwa, mune yekuchengetedza kamera uye chikamu chemusuwo. Gore rega rega, iyo ...
naArenti Smart musi wa22 / 03/21
Hangzhou - Mar. 9, 2021 - Arenti, anotungamira IoT smart imba yekuchengetedza kamera mupi, nhasi azivisa kuti iri kusimbisa kuvepo kwayo muMongolia nemumwe mutsva mudiwa Topica LLC semugoveri wayo wese akateedzana chigadzirwa renji. Th ...
Hangzhou - Zvita 24, 2021 - Arenti, anotungamira IoT smart home chengetedzo kamera mupi, nhasi azivisa kuti iri kuvhura kuvepo kwayo muMorocco neEleczar semugovanisi wayo wese akateedzana chigadzirwa renji. Vatsva vatsva ...
naArenti Smart musi wa20 / 03/21
Hangzhou - Ndira 1, 2021 - Arenti, anotungamira IoT smart imba yekuchengetedza kamera mupi, nhasi azivisa kuti iri kusimbisa kuvepo kwayo muVietnam neyemumwe mudiwa weiyo ITM Management semuparadzi kune ayo ese akateedzana chigadzirwa renji. ...